Wget2 2.0, yekutanga yakagadzika vhezheni yeuyu anotsiva Wget | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore matatu nehafu ekukura kusunungurwa kwe yekutanga yakagadzika vhezheni yeprojekti "GNU Wget2 2.0", iyo iri kuvandudzwa senge yakagadziriswazve vhezheni yechirongwa kuti ishandise kudzokorodza kurodha kwe "GNU Wget" zvemukati.
GNU Wget2 yakagadzirirwa uye kunyorwazve kubva pakutanga, uye inozivikanwa nekubviswa kweakakosha webhu mutengi mashandiro mune raibhurari raibhurari, iyo inogona kushandiswa mune yakamira yega mashandisirwo.
1 Nezve Wget2
2 Maitiro ekuisa Wget2 paLinux?
Panzvimbo pekugadzirisa zvishoma nezvishoma iyo iripo kodhi base, akafunga kuita zvekare zvese kubva pakutanga uye akawana rimwe bazi reWget2 kuita mazano ekugadzirisa, kuwedzera mashandiro, uye kuita shanduko dzinoputsa kuenderana. Kunze kwekuguma kwekutsigirwa kweFTP uye fomati yeWARC, wget2 inogona kuita sekutsiva kuri pachena kweiyo classic wget utility mumamiriro mazhinji.
Nokuburitswa kweshanduro iyi mashandiro akaendeswa kune libwget raibhurari pamwe chete nekushandurwa kwekuvakwa kwakawanda-tambo kwakagadzirwa, iko mukana wekugadzirisa kwakabatana kwakawanda uchienderana uye kurodha pasi mukuyerera kwakawanda kwakapihwa zvakare. Zvinotokwanisika kuenzanisa kurodha pasi kwefaira rine bhatani rinotsemuka uchishandisa "-chunk-size" sarudzo.
Chimwe chitsva icho inomira kunze ndiko kutsigirwa kweiyo HTTP / 2 protocol padyo neInga-Modified-Kubva HTTP musoro wekutora chete yakashandurwa dhata.
Ipo iyo OpenSSL-yakatarwa shanduko chikamu ichigadzirisa CRL cheki, ALPN yakaitwa uye gadziriso dzakagadzirwa kugadzirisa matambudziko nekukanganisa kwendangariro.
Kune rimwe divi, zvinotaurwa zvakare kuti rezinesi ruzivo rwakagadziridzwa, zvigadziriso zvakasiyana siyana zvakagadzirwa mumakompiyuta ekutsigira lzip yekugamuchira encoding, pamwe nekutendera runyorwa rwezviratidzo zvekubatanidza uye kugadzirisa dhairekitori kunetsana ne -no-clobber.
Panguva yechikamu chesarudzo dzakawedzerwa tinogona kuwana kugadzirisa nzira yekuenderana kumashure, kugadzirisa data, iyo -yomunhu-faira sarudzo yakawedzerwa kuvandudza kuenderana neshanduro dzapfuura, pamwe ne-- regedzera-kureba sarudzo, -kushandura-faira-chete sarudzo uye -download-attr sarudzo yekushandisa iyo 'download hunhu' kubva kuHTML5
Yeimwe shanduko dzinozivikanwa izvo zvinobuda mushanduro yekupedzisira:
-Robots = kure sarudzo yakawedzerwa kumarobhoti.txt kurodha pasi
Wakawedzera pkg-config rutsigiro rweGPGME
Shanduko dzekushandura (-k) dzakagadzirwa pamwe chete ne -E
Yakagadzirisa iyo cookie faira musoro kuti uonekwe neiyo 'faira' rairo
Yakagadziriswa kurodha zvitupa zveCA kana 'system' isingatsigirwe
Yakatumidzwazve zita kubva -kuedza-pa-http-chinzvimbo kuenda -kuedzazve-pa-http-kukanganisa
Peji zvinodiwa muganho wemashizha mapeji chete
Ruramisa NULL kuderedzwa ne -convert-zvinongedzo
Inotsigira terminal hyperlink pane zvinobuda
Seta iyo -disable-manylibs switch kuti tiremedze kuvaka madhibhurari madiki
Tsigiro - kumashure paWindows
Wedzera kubhadhara kweHTTP2
Inotsigira HTML yekumisikidza hunhu (ye to uye nzvimbo ma tag)
Wedzera iyo -download-attr = [strippath | usepath] kudzora kurodha pasi rutsigiro
OpenSSL: wedzera OCSP rutsigiro
OpenSSL: shandisa OCSP stapling
Kutsigira data: URL mune srcset hunhu
Yakagadziriswa nyaya dzakasiyana
Yakavandudzwa kodhi, zvinyorwa, kuvaka, kuyedza, CI, uye zvimwe
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi nyowani yakaburitswa yeWget2, unogona kutarisa izvo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Wget2 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chinoshandiswa, vanofanirwa kuziva kuti mune kumwe kwekuparadzirwa kweLinux vanogona kuwana iyo package mukati mezvitoro zvavo.
Kunyangwe ivo vachigona zvakare kuumbiridza pasuru nekutevera iyi mirairo. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutora kodhi yekodhi ne:
Isu tinoenderera nekunyora ne:
Uye pakupedzisira isu tinoisa ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Wget2 2.0, yekutanga yakagadzika vhezheni yeuyu anotsiva Wget
OpenSSL 3.0 inosvika new module module, shanduko yelayisensi nezvimwe